Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddiga ka baaraan degga Doorashooyinka dalka - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddiga ka baaraan degga Doorashooyinka dalka
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddiga ka baaraan degga Doorashooyinka dalka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay weheliyeen Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa warbixin ka dhageystay Guddiga Ka-baaraan degga Doorashooyinka dalka.
Guddoomiyaha Guddiga ahna Wasiirka Dastuurka XFS Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka warbixiyey qorshaha shaqo ee Guddiga, latashiyadii ay la yeesheen Madaxda Dowlad Goboleedyada, Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xisbiyada siyaasadda, Ururrada Bulshada Rayidka ah iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Guddiga ayaa la wadaagay Madaxweynaha iyo Madaxda Heer Dowlad-Goboleed nuxurka daraasadda ay sameeyeen ee ku aaddan doorashooyinka dalka, halbeegyada iyo jaantuska muhiimka u ah qorshaha Qaran ee qabsoomidda doorasho loo dhanyahay oo waafaqsan sharciga doorashooyinka ee la meelmariyey.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyey Xubnaha Guddigan ee Heer Federaal, Heer Dowlad Goboleed iyo Gobolka Banaadir qorshaha cad ee ku saabsan doorashooyinka dalka ee ay soo diyaariyeen, kaas oo dhammeystiraya shaqada mugga weyn ee ay qabteen Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo heshiisyada siyaasadeed ee horey loo gaaray kuwaas oo ku saabsanaa doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in doorashadu ku qabsoonta wakhtigeeda, kana turjunto hiigsiga iyo himilada shacabka Soomaaliyeed.
Dhankooda, Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada, Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed ayaa ku dhiirrigeliyey Xubnaha Guddiga Ka-baaraan degga doorashooyinka dalka in ay si daah furan ula wadaagaan shacabka Soomaaliyeed nuxurka talo-u-rurinta ay sameeyeen, si dhabbaha loogu xaaro doorasho loo dhanyahay oo wakhtigeeda ku qabsoonta.
Kulanka madaxeyne farmaajo iyo guddiga talobixinta doorashada